Lalànan'ny tompon-trano-mpanofa nataon'ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny fanofana trano 2022
Lalànan'ny tompon-trano-mpanofa nataon'ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana hofan-trano ho an'ny taona 2022
Tompon-trano sy lalàna mpanofa Dubai
Ny fifandirana momba ny fanofana dia iray amin'ireo fifandirana ara-dalàna manjaka indrindra eran-tany, ary tsy maningana ny Emirà Arabo Mitambatra. Ny vidiny mora amin'ny fikarakarana sy ny fidiram-bolan'ny hofan-trano dia roa amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny fifandirana. Raha oharina amin'ny firenena hafa, ny UAE dia manana rivo-piainana mandalo noho ny habetsahan'ny mpila ravinahitra iraisam-pirenena mipetraka any.
Ankoatr'izay, nitombo ny toe-karenan'ny tsenan'ny fanofana noho ny fananan'ireo vahiny vahiny manana fananana any UAE. Ny tanjon'ireo tompon'ny trano ireo dia ny hampitombo ny fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fandoavana hofan-trano ary hiantohana ny fiarovana ny zon'izy ireo ihany koa, izay idiran'ny Mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana.
Vokatr'izany, ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra dia namoaka ny Lalàna momba ny Fanofanana, izay mametraka ny fitsipika fototra momba ny famaranana sy ny fisoratana anarana amin'ny fifanarahana fanofana sy fanofana. Ny lalàna momba ny hofan-trano ihany koa dia ahitana ny zo sy adidy amin'ny tompon-trano sy ny mpanofa.
Noho ny antony isan-karazany, anisan'izany ny tsy fahatokisana ara-toekarena, dia tsy afaka miatrika toe-javatra toy izany ny olon-tsotra. Amin'ny toe-javatra toy izany dia ilaina ny mitady toro-hevitra amin'ny Mpisolovava manam-pahaizana momba ny fanofana.
Serivisy mpisolovava ho an'ny fifanolanana momba ny fanofana
Loharanom-panahiana lehibe amin'ny toe-karena tsy azo antoka ao Emirà Arabo Mitambatra ny tahan'ny hofan-trano ambony ary loharanon'ny fifanolanana eo amin'ny tompon-trano sy ny mpanofa. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia zava-dehibe ho an'ny roa tonta ny mandinika tsara ny zo sy ny adidy voalaza ao amin'ny fifanarahana fanofana mba hisorohana ny fifandirana amin'ny fanofana.
Ny tsara indrindra dia ny manakarama mpisolovava ao Emirà Arabo Mitambatra izay manam-pahaizana manokana amin'ny fifanolanana fanofana, satria be dia be amin'ny fahalalana sy traikefa amin'ny fiatrehana ny fifanolanana toy izany. Ny serivisy azon'ny Mpisolovava momba ny fifanolanana manam-pahaizana any UAE amin'ny fifanolanana momba ny fanofana dia misy:
Fianarana ara-dalàna: Mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana momba ny fanofana dia voaofana hitady lalàna mifandraika amin'ny olan'ny lalàna momba ny mpanofa sy ny tompon-trano. Afaka miditra amin'ny angon-drakitra ara-dalàna izy ireo, izay afaka manafaingana sy manamora ny fikarohana tranga. Ny fianarana ara-dalàna dia hahasoa ny raharahanao amin'ny fahafantaranao ny andraikitrao, ny adidinao ary ny zonao amin'ny maha-olom-pirenena anao sy tompon-trano na mpanofa.
Fandinihana ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany sy ny fanolorana torohevitra: Afaka manampy anao amin'ny famahana ny banga amin'ny fifanarahana fanofanao ny Mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana. Tokony ho fantatry ny mpanofa fa ny tompon-trano sasany dia manampy fehezan-dalàna momba ny saram-pandraharahana amin'ny fifanarahana fanofana na fanofana mba hisorohana ny fitoriana tsy misy dikany. Raha toa ka manana an'io fepetra io ny fifanarahana hofan-tranonao na ny fampanofana, dia manan-jo hanonitra ny sara ara-dalàna ianao ary koa ny fandaniana ara-dalàna raha mandresy amin'ny tompon-trano ianao.
Mba hahafantaranao ny lalàna momba ny fanofana navoakan'ny governemanta, izay milaza fa alohan'ny ahafahan'ny olona manofa na manofa trano any UAE dia tsy maintsy vita ny fifanarahana ary misoratra anarana amin'ny Varotra sy hofa fananana mifaka Manampahefana manara-maso alohan'ny hifindrana ao amin'ny trano, trano, na karazana fananana hafa. Ny lafin-javatra voalaza ao amin'ny fifanarahana hofan-trano ao amin'ny lalàna fifanarahana dia ahitana:
Ny zo sy ny adidin’ny tompon-trano
Ny zo sy ny adidin'ny mpanofa
Ny fe-potoana sy ny sandan'ny fifanarahana, ary koa ny fandoavana matetika
Ny toerana misy ny trano hofaina
Fifanarahana hafa ilaina natao teo amin'ny tompon-trano sy ny mpanofa
Ny zo sy adidin'ny tompon-trano
Raha vantany vao vita sonia araka ny lalàna momba ny fanofana ny fifanarahana, ny tompon-trano dia tsy maintsy manao;
Avereno amin'ny toe-javatra tsara ny fananana
Vitao ny asa fikojakojana rehetra raha misy zavatra simba
Halaviro ny fanavaozana na manao asa hafa mety hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mpanofa.
Ho setrin’izany, karama isam-bolana ny tompon-trano araka ny fifanarahana. Raha tsy mandoa vola ny mpanofa, dia manana fahefana ny tompon-trano hangataka amin’ny tompon-trano hiala amin’ilay trano mandra-pandoavana ny vola. Eo no idiran'ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana mba hisorohana ny fifandirana amin'ny fanampiana ny andaniny sy ny ankilany amin'ny fifanarahana azo ekena izay mahasoa ny andaniny sy ny ankilany.
Ny zo sy adidin'ny mpanofa
Raha vao miditra ao amin'ny trano hofaina ny mpanofa iray araka ny lalàna momba ny hofan-trano, dia andraikitr'izy ireo ny:
Manao fanatsarana ny trano raha tsy manaiky izany ny tompon-trano
Fandoavana ny hofan-trano araka ny fifanarahana ary ny Emirà Arabo Mitambatra dia nametraka ny hetra sy ny sarany ary koa ny kojakoja ilaina (raha misy amin'ireo fandaharana ireo no natao)
Fandoavana antoka rehefa manofa trano
Miantoka fa ny Famerenana ny fananana ao amin'ny toe-javatra mitovy, dia rehefa niala.
Ankoatra izany, ny antoko dia afaka manao fandaharana manokana. Araka ny voalazan'ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana momba ny fanofana, dia tokony hampidirina ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ireo fandaharana namboarina ireo. Azo ovaina sy ovaina ihany koa ny fifanarahana fanofana.
Inona avy ireo fifanolanana mahazatra indrindra any Dubai?
Ny fifandirana mahazatra eo amin'ny tompon-trano sy ny mpanofa dia mety tsy mitovy amin'ny tsy fifanarahana toy ny:
Fampitomboana ny hofan-trano
Hofan-trano tsy voaloa amin'ny fotoana tokony ho izy
Ny tsy fahombiazan'ny fikojakojana
Ny fananiham-bohitra ny fananan'ny mpanofa nefa tsy fantany
Mitaky petra-bola hofan-trano tsy misy fampandrenesana mialoha
Tsy miraharaha ny fitarainan'ny mpanofa momba ny trano
Fanavaozana na fanovana ny trano tsy misy faneken'ny tompon-trano
Ny tsy fandoavan'ny mpanofa ny faktiorany.
Afaka manampy amin'ny famahana ireo fifandirana ireo ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana amin'ny fanofana trano, araka izay mety hitranga. Manoro hevitra ihany koa izy ireo mba hisoratra anarana amin'ny fifanarahana hofan-trano rehetra Dubai Departemantan'ny tany.
Inona avy ireo lalàna fandroahana UAE?
Ny lalàna no mamaritra ny fomba tsy maintsy hanatanterahana ny fandroahana. IRETO ampiharina mafy ny lalàna ao UAE ary tena mahasoa ny mpanofa indrindra. Ny masoivoho mpandrindra ny fananan-tany no miandraikitra ny fanaraha-maso ny raharaha rehetra momba ny fananan-tany (RERA). RERA dia iray amin'ireo fitaovam-piadiana mifehy (DLD) an'ny Departemantan'ny Tany Dubai.
Ity sampan-draharaha ity dia namoaka fitsipika mifehy ny fifandraisan'ny mpanofa sy ny tompon-trano. Ny lalàna no mamaritra ny andraikitry ny andaniny sy ny ankilany sy ny dingana arahina raha misy ny fifandirana.
Araka ny Andininy (4) amin'ny Lalàna (33) tamin'ny 2008, ny tompon-trano sy ny mpanofa dia tsy maintsy miantoka fa ny fifanarahana fanofana ara-dalàna dia misoratra anarana amin'ny RERA amin'ny alàlan'ny Ejari, miaraka amin'ireo antontan-taratasy voamarina rehetra.
Araka ny voalazan'ny andininy faha-6 amin'ny Lalàna, rehefa tapitra ny fifanekena momba ny hofan-trano ary tsy mandao ny trano ny mpanofa miaraka amin'ny fitarainana ara-pomba ofisialy avy amin'ny tompon-trano, dia heverina ho azy fa ny mpanofa dia maniry ny hanitatra ny fanofana mandritra ny fe-potoana mitovy na herintaona.
Ny andininy faha-25 dia mamaritra ny fotoana mety handroahana ny mpanofa raha mbola manan-kery ny fifanarahana momba ny fanofana, ary koa ny fepetra handroahana mpanofa rehefa tapitra ny fifanarahana.
Ao amin'ny andininy (1), ao amin'ny Andininy (25), ny tompon-trano dia manana zo ara-dalàna hanaisotra mpanofa izay tsy manaja ny adidy rehetra ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fampahafantarana ny fahataperan'ny fanofana. Ny andininy 1 dia mamaritra toe-javatra sivy izay ahafahan'ny tompon-trano mangataka ny fandroahana mpanofa alohan'ny hifaranan'ny fifanarahana.
Ao amin'ny andininy faha-2, ao amin'ny andininy faha-25 amin'ny lalàna laharana faha-33 amin'ny taona 2008, ny tompon-trano dia tsy maintsy manolotra fampandrenesana fandroahana amin'ny mpanofa mandritra ny 12 volana fara-fahakeliny raha te handroaka ilay mpanofa izy aorian'ny fotoana. lany ny fifanarahana.
Ny andininy faha-7 amin'ny lalàna (26) amin'ny taona 2007 dia manamafy indray ny fitsipika fa ny andaniny sy ny ankilany dia tsy afaka manafoana ny fifanarahana fanofana ara-dalàna raha tsy manaiky ny roa tonta.
Ny andininy faha-31 amin’ny Lalàna (26) tamin’ny taona 2007 dia nilaza fa rehefa nisy ny fandroahana natao, ny mpanofa dia tompon’andraikitra amin’ny fandoavana ny hofan-trano mandra-pivoaka ny didim-pitsarana farany.
Araka ny voalazan’ny andininy faha-27 amin’ny lalàna (26) tamin’ny taona 2007, dia hitohy ny fifanarahana momba ny fanofana rehefa maty ny mpanofa na ny tompon-trano. Ny mpanofa dia tsy maintsy manome filazana 30 andro alohan'ny hamaranana ny fanofana.
Ny fanofana dia tsy hisy fiantraikany amin'ny famindrana ny fananan-tany amin'ny tompony vaovao, araka ny voalazan'ny andininy (28) amin'ny lalàna (26) 2007. Mandra-pahatapitry ny fifanekena amin'ny fanofana, ny mpanofa amin'izao fotoana izao dia manana fidirana tsy misy fetra amin'ny trano.
Afaka manampy anao hamaha ny olana ny Mpisolovava manam-pahaizana momba ny fanofana
Ny fifanolanana amin'ny fanofana dia azo vahana raha samy vonona ny hiatrika ny raharaha ara-dalàna sy ny lalàna mitarika ny fifanarahana momba ny fanofana ny roa tonta. Saingy raha tsy misy vonona ny hanaraka, ny fifandraisana amin'ny serivisy mpisolovava manam-pahaizana momba ny fifanolanana momba ny fanofana no safidy tsara indrindra.